Niantso “renfort” FIGN mihitsy ny zandary: tezitra ireo tsy nahazo Vatsy tsinjo, tapaka ny lalana teny Bemasoandro | NewsMada
Tapaka nandritra ny maraina tontolo ny lalana. Voatery niantso “renfort” avy eny amin’ny FIGN ny zandarin’Itaosy. Nanao fihetsiketsehana an-dalambe naneho ny hatezerany ireo olona maro, nilaza ho tsy nahazo ny Vatsy tsinjo, tao amin’ny kaominina Bemasoandro, omaly.
Horakoraka, fifanjevoana, fifanosehana, fahatapahan-dalana…Voatery nivily lalana any Avarabohitra ny fiara hihazo ny Renivohitra. Nitohana tanteraka ny fifamoivoizana. Santionany amin’ny zava-niseho nandritra ny fidinana an-dalana nataon’ireo andian’olona marobe tsy nahazo ny anjarany noho ny fihetsiky ny sefo fokontany sasany izany. “Misy ny kiantranoantrano sy ny fanavakavahana ataon’ny sefom-pokontany ka ireo efa nahazo tamin’ny voalohany ihany no mbola nomena ny tapakila hahafahana mahazo ny fanampiana tamin’ity andiany manaraka ity”, hoy ny solontenan’ireo tsy nahazo ny fanampiana Vatsy tsinjo.
Namidy 6 000 Ar ny tapakila ahazoana ny fanomezana
Voalazan’ireo mponina sasany fa nisy tamin’ireo sefom-pokontany sasany no mitaky vola vao manome ny tapakila hahafahana mahazo ny fanomezana. “Alefaso amin’ny fahamarinana ny fizarana fa tsy rariny izao atao anay izao. Hatramin’izay nisian’ny fizarana, tsy mbola nahazo ny anjaranay mihitsy izahay fa olona miisa 350 fotsiny no mahazo eto amin’ny kaominina. Raha tsy manome 3 000 Ar na 6 000 Ar ny sefom-pokontany, raha ny zava-misy tao amin’ny fokontany Andranonahoatra dia tsy mahazo ny tapakila. Ny fianakiavian’ny sefom-pokontany ihany no mahazo ny tapakila fa ny vahoaka tena misoratra ao amin’ny fokontany tsy mahazo”, hoy Razafindrakoto Edmond.
Niatrana ny zandary sy ny avy amin’ny FIGN
Nolazainy aza fa tamin’ny alina no nozaraina ireo tapakila ka nahatonga ireo mponina sasany tsy nahazo ny anjarany.
Lisitra hafa no nomen’ny fokontany kanefa izao ny zava-misy ka niangaviany ireo tompon’andraikitra mba hijery akaiky ity kiantranoantrano ao amin’ny fokontany ity, ireto tsy nahazo ny anjarany ireto. Niatrana teny an-toerana hatramin’ny tolakandro, manoloana ny mety ho fanararaotana na fihoaram-pefy ny eo anivon’ny zandary. Mbola nohamafisin’ny eo anivon’ny FIGN…
Etsy an-daniny, nahitana hetsika sy tsy fahafaliana tahaka izao koa ny fokontany sasany.
Nihetsika koa ny teny Amboditsiry sy Ankadikely Ilafy
Anisan’izany ny teny Amboditsiry. Nitaky ny fialan’ny sefo fokontany ireo mponina. Anisan’ny nambaran’izy ireo tamin’izany fa nalaina ny anarana nefa tsy mba nisitraka ny Vatsy tsinjo sy ilay vola 30 000 Ar izy ireo. Nanao rodobe teny amin’ny biraon’ny fokontany izy ireo, omaly nitaky ny hanesorana ity mpitantana ity. Tahaka izany koa ny teny Ankadikely Ilafy. Tsy faly ireo avy any amin’ny fokontany Andrononobe fa vary iray kilao no nomena ny mponina raha tokony ho iray gony izany. Nentin’ny mpitandro filaminana ilay sefo fokontany ary narahin’izy ireo hatrany amin’ny borigady.
Nialoha ireo rehetra ireo, efa nahitana hetsika ny fokontany sasany teny amin’ny boriborintany II.
Araka izany, tsy tokony hiandrasana ny filoha avokoa ny tahaka izany fa ilana ny fandraisana andraikitra eny ifotony sy ny fahatsapan-tena manoloana ny ady iraisana.
J.C sy Synèse R.